Kooxda Manchester City Ayaa Guul Ka Gaadhay Kooxda West Ham Tartanka Premier League. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Manchester City ayaa arimaheeda banaanka soo dhigtay hal dhinac iyagoo u fududeeyay inay 2-0 uga badiyaan West Ham Arbacadii ciyaartii ka dhacday Etihad Stadium ee Premier League.
Dhismaha ciyaarta ayaa waxaa xukumayay ganaax labo sano ah oo laga soo rogay kubada cagta Yurub oo lagu soo rogay City oo ay ku soo rogeen UEFA oo ku xadgudbeysa sharciga dhaqaale wanaaga ciyaarta.
Laakiin waxa ay aheyd wax iska caadi ah marka loo fiiriyo City madaama Rodri uu qeyb libaax leh ka qaatay qeybtii hore isagoo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeysay ee kooxda halka Kevin De Bruyne uu isna labaad ku soo daray saacad ka dib.
Taasi waxay cadeysay in ku filan kooxda Pep Guardiola, oo ka soo laabatay guuldaradii 2-0 ee ka soo gaartay Tottenham horaantii bishaan inay furaan farqiga afarta dhibcood ee Leicester City.
Ciyaartii hore ayaa la joojiyay 10 maalmood ka hor sababtoo ah Storm Ciara, oo ay weheliso tartankii nasashada ee bartamihii xilli ciyaareedkii, ayaa la micno ah in 17 maalmood ay u nasanayaan ciyaartoyda City.
Waqti badan kama qaadin in martigaliyayaashu ay socodsiiyaan, Gabriel Jesus wuxuu fursad qaali ah ka qaatay isagoo hal taabasho aad u badan ka horreeyay goolka islamarkaana u ogolaaday Ryan Fredericks inuu soo laabto.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa mar kale dib u dhigay kubad aad u dheer ka dib furitaankiisii ​​weynaa ee City, laakiin Rodri ayaa gooldhalinta ku furay kubad madax aheyd daqiiqadii nus saac ka dib nus saac.
Wiilasha Guardiola ayaa dadaal ugu galay qaybo badan oo ka mid ah tartanka laakiin waxa ay heleen gool labaad daqiiqadii 62-aad De Bruyne, oo baas kubad la isweydaarsaday Bernardo Silva oo dab ku tuuray.
David Silva ayaa dhaawac uu ka soo gaaray shantii daqiiqo ee ugu dambeysay, wax yar ka dib markii Lukasz Fabianski uu badbaadiyay badbaadin fiican si uu uga leexiyo Jesus, laakiin City ayaa shabaqa soo taabtay si ay ugu soo laabato wadada guusha ee garoonkeeda.